Ampiasao Tsara Ireo Fitaovana Fampianarana
Toy ny manao trano isika rehefa manao mpianatra. Tokony ho haintsika tsara ny mampiasa an’ireo fitaovana ananantsika, mba hahavitana tsara an’ilay asa. Ny Tenin’Andriamanitra no voalohany indrindra amin’izany. (2Ti 2:15) Tsy tokony hatao ambanin-javatra koa anefa ireo Fitaovana Fampianarana, * anisan’izany ny video. Ny hanao mpianatra mantsy no tanjontsika.
Tianao ho hay tsara ve ny mampiasa an’ireo Fitaovana Fampianarana? Izao àry atao: 1) Mangataha fanampiana amin’ny mpiandraikitra ny andia-mpitory misy anao, 2) miaraha manompo amin’ny mpitory na mpisava lalana za-draharaha, ary 3) manaova fanazaran-tena tsy tapaka. Ho faly ianao handray anjara amin’ilay fanorenana an’ohatra, rehefa mahay mampiasa tsara an’ireo Fitaovana Fampianarana.
^ feh. 3 Tsy anisan’ny Fitaovana Fampianarana ny boky sasany, satria natao ho an’ny karazan’olona manokana. Azo ampiasaina izy ireny rehefa ilaina.